Iqokelwe ama-Satma imbongi yaseMgungundlovu | News24
LAST UPDATED: 2018-01-22, 13:18
Iqokelwe ama-Satma imbongi yaseMgungundlovu
Imbongi yaseMgungundlovu u-Eric 'Ntatheli waseMazulwini' Phetha uqokelwe kuma-Satma ka-2017 kwisigaba se-best poet. Isithombe: Sithunyelwe
IMBONGI yase Hopewell, u-Eric ‘Ntatheli waseMazulwini’ Phetha uqokwe kumaSouth African Traditional Music Achievement Awards (Satma) ka-2017 kwisigaba se-best poet kanti uthe akangabazi ukuthi uzobuya nayo lendondo okuyinto athe izobuyisa isithunzi sendawo yangakubo.
“Indawo yangakithi yaziwa njengendawo intsha yakhona engazi noma liyaphuma noma liyashona yini, ephilela ukudla izidakamizwa igwazane kanti into engenza ukuthi ngijabule kakhulu kangaka yingoba indawo yangakithi ngokuqokwa kwami isithunzi sayo sesizobuya,” kusho uPhetha.
Ama-Satma azoba banjelwa eThekwini e-Durban ICC kanti abantu abafisa ukuvotela uPhetha bengathumela umlayezo othi SATMA Ntatheli waseMazulwini Best Poet kwinombolo ethi 34066.
Akaqokelwanga ama-Satma kuphela uPhetha ozibongele ngokuzetha undondo ziyamlandela njengoba nakuma-KZN Young Achievers kanjalo nakuma-Crown Gospel awards nakhona eqokelwe ubuchule bakhe bokuhaya izinkondlo.
“Lokhu ngaqala ukaba yimbongi ngo-2008 bengilokhu ngiziqoqela izindondo kwamanye ama-awards asafufusa okwiyinto engazitshela yona ukuthi kuhle ngiqale ngisebenze kulemincintiswano emincinyane ngoba awukwazi ukuqala kokukhulu ugcine kokuncane,” kusho yena.
Uthe umncintiswano wokugcina anqobe kuwona ubuseMbali e-13 obusungulwe ibandla i-Shioh lapho anqoba ngenkondlo esihloko sayo esithi ‘Udlala ngeGeja kuZiliwe’.
“Lenkondlo ikhuluma kakhulu nabantu besifazane abanganasimilo abazi ukuthi abayilutho ngaphandle kwesilisa, abajabulela ukuthi baluthwa ngemali bagibele nezimoto ezinamasondo emhlane bakhohlwe ukuthi ekudleni kwabo imali yesilisa nemizimba yabo iyadliwa futhi iyancipha,” kusho uPhetha.
Kumanje lembongi inecwecwe layo elisha eliphume kuwona lonyaka ngenyanga ka-May isihloko salo esithi ‘Ubumnandi Bevangeli Lensindiso’.
Ngokusho kwakhe uPhetha, ukuba yimbongi yinto ayifumbathiswa uNkulunkulu njengoba nezinkondlo zakhe zibhalelwe ukukhonza uMdali kanti uthe ngisho esesiteji ehaya inkondlo usuke engeyedwa kodwa kukhona uJesu eduze kwakhe.
“Leligama likaNtatheli yigama engaliqanjwa umphathi wangasekhaya e-Hopewell ngenxa yokuthi ngesikhathi ngiqala ukuba kulomkhakha wezinkondlo bengizithanda kakhulu izindaba uma nje kuke kwakhona okwenzakalayo noma kugwazana abafundi esikoleni ngangisondela khona ngibhale ngayo leyonto eyeznakalayo bese kwaba khona abathi ngeke wena kusukela namhlanje unguNtatheli,” kusho yena.
Uqhube wathi usesebenze ezindaweni eziningi ezahlukahlukene kwezinye eshiyelana inkundla nabaculi asebemnkantshumbomvu kanti useke wazwakala nakumsakazo uKhozi FM.
“Abantu esengiphushe nabo iminyaka eminingi ngingabala uSiyabonga Mpungose, uScelo Mpungose, kanye noMzi Mngadi kanti njengamanje ngingaphansi kweqembu elibizwa ngokuthi eThekwini Reading and Writing Club ekwiyona engisebenza kuyo,” kusho uPhetha.
Ebeka awokugcina, uthe empilweni akaziboni enza okunye ngaphandle kokuba yimbongi ngoba uyazifela kakhulu ngezinkondlo.